Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo wefdi uu hogaaminaayo oo Magaalada Riyadh u amba baxay – idalenews.com
Wafiga uu horkacaya wasiirka ayaa waxaa ka mid ahaa taliyaha ciidanka booliska federaalka Soomaaliyeed S/gaas Dr Shariif Sheekhuna Maye, iyagoona u kicitimay magaalada Riyaad ee caaasimadda boqortooyada Sacuudi caraabiya halkaasoo maalinta berri ah uu ka furmo doono shir sanadeedkii wasiirada arrimaha gudaha ee dalalaka ku jira ururka jaamacadda carabta.
Ka qaybgalka ay dowladda soomaaliya ka qaybgalayso shirkan ayaau nqoqonaya shirkii ugu horeeyay ee ay Soomaaliya ka qaybgasho muddo labaatan sanno kadib iyadoo ah dowlad buuxa oo caalamku aqoonsana yahay kana baxday muddadii ku meelgaarka ahayd.
Shirka berri furmaya ayaa sida wararku sheegayaan ajendayaasha looga hadlayo waxaa ka mid noqonaya sidii ururka jaamacadda carabtu ay taageero dhan walba ugu fidin lahaayeen dib u dhiska hayadaha amniga ee dalka Soomaaliya iyadoo wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha ciidanka booliskuba ay halkaas sharaxaad ka siin doonaan ka qayb galayaasha baahidooda. Sidoo kale arrimaha kale ee shirkaas looga hadlayo waxaa ka mid noqon doona sidii ay waddamada ku jira ururka jaamacadda ay wada shaqayn buuxda uga yeelan lajhaayeen dhanka sugidda iyo amniga iyo ka hortagga dambiyada.
Taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed S/gaas Dr Shariif Sheekhuna Maye ayaa intii uusan ka ambabixin magaalada Muqdisho saakay kulan gaar ah kula qaatay xarunta taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ”Commando Polizia” saraakiisha sare ee ciidanka booliska soomaaliyeed halkaasoo uu taliyuhu uga jeediyay saraakiishaas hadala isugu jira guubaabo iyo dardaaran isagoona kula ballamay saraakiishaas in ay howlahooda u gutaan si hagar la´ aan ah isla markaana la dardargeliyo howlaha lagu sugayo amniga caasimadda uqdisho iyo goobaha kale ee ku jira gacanta dowladda.
Ugu dambeyntii waxaa taliyuhu uu sheegay in muddada uu dalka ka maqan yahay uu sii hayn doono xilka ku simaha taliyaha ciidanka boolsiak federaalka soomaaliyeed S/guuto Axmed Dayib ”Dhega caleen” oo ah taliyaha dugsiga sare ee tababarka booliska ee magaalada Muqdisho ”Akadeemiyada Generaal Kaahiye.